Ụlọ nsọ Egypt | Akụkọ njem
Ọ bụrụ na -amasị gị n'akụkọ ihe mere eme, mmepeanya oge ochie na ihe omimi, Egypt ga -anọrịrị n'ụzọ njem gị. Otu oge na ndụ gị, ị ga -aga Ijipt wee hụ ihe ịtụnanya ya na mbụ.
na ụlọ nsọ nke Egypt Ọ mara mma ma ị nwere ike ịhụ ha n'ọtụtụ foto na telivishọn, mana ịhụ ka ha na -ebi ndụ na na -eduzi bụ ihe na -enweghị atụ. Ị ga -atụ uche ha? N'ebe a, anyị na -ahapụrụ gị aha ụlọ nsọ kacha mma n'Ijipt, nke ị ga -ahụ ee ma ọ bụ ee.
Ihe owuwu ndị a ha dị ọtụtụ puku afọ na enweghị obi abụọ ha bụ ihe dị ebube. Njem njem mbụ na Egypt na -eju ndị njem niile anya, mana ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịga ọtụtụ ugboro, ihe ijuanya anaghị akwụsị na nke ahụ dị mma.
Obi abụọ adịghị ya na Egypt nwere ụlọ arụsị kachasị na ụwa na n'ahịrị n'ozuzu ha malitere na narị afọ nke anọ BC. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ama ama n'ụwa, mana enwerekwa ndị ọzọ mara mma na enweghị igwe nta akụkọ.
N'Ijipt ihe niile bụ ihe mgbe ochie, ebe ọ bụla otu nzọ ụkwụ nwere mkpọmkpọ ebe ma ọ bụ ụlọ arụsị oge ochie. Site na Cairo ruo Luxor, na -eso Naịl ruo Aswan, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịhụ ụfọdụ ọmarịcha ihe owuwu ndị a.
Mbụ ị ga -akpọ aha ahụ Lọ Karnak nke wuru n'etiti 2055 BC na 100 AD A raara ya nye chi atọ, Amun-Ra, Mut na Montu, a ga -asịkwa na ọ bụ nnukwu ụlọ nsọ ya ọ bụ ebe okpukpe kacha buo ibu.
Nkuku dị ịtụnanya bụ Halllọ Hypostyle, saịtị kpuchie ya site na enyemaka nke veranda ndị juru na Egypt mana enwere ike ịmụ ya nke ọma na saịtị a. Ime ụlọ a pere mpe, nwere ogidi 134 na ahịrị 16. N'ebe a, ọ dabara adaba iji ntuziaka mee njem ahụ wee gee ntị nke ọma na nkọwa ya.
El Abu Simbel temple Ebu ụzọ wuo ya na ndagwurugwu Naịl, mana Site na iwu mgbochi mmiri Aswan, a ga -ebugharị ya ka ọ bụrụ ọkaibe nke injinịa ọgbara ọhụrụ. Nke ahụ mere na 60s wee hapụ ebe nrụpụta mbụ na ala ọdọ Nassar.
Taa ụlọ nsọ Abu Simbl dị nchebe: Enwere ihe oyiyi 20 nke Ramses nke Abụọ ma e wuru ya na 1265 BC, mana ndị nnukwu ahụ nọ n'ọnọdụ zuru oke. Ihe a na -emekarị bụ ịgba onye njem site na Luxor ruo Aswan ma ọ bara uru ịga kilomita 280 n'etiti isi ihe abụọ ahụ. Wayzọ ọzọ bụ iji ụgbọ mmiri Naịl gaa Aswan ma nọrọ ụbọchị ole na ole ebe ahụ.
A raara ụlọ nsọ Medinet Habu nye Ramses III na ụfọdụ ogidi ya na -ejigide ihe osise ha. Ọ dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Luxor na Ọ bụ ụlọ arụsị ochie nke abụọ kacha ochie na Egypt.
Ụlọ nsọ nke na -eju m anya mgbe niile, n'ihi na nrụzigharị na -enye ohere imepe windo n'oge gara aga, bụ Templelọ nsọ Mortur nke Hatshepsut. Hatshepsut bụ eze nwanyị nwụrụ na 1458 BC na ọmarịcha ili ya ọ dị nso na Ndagwurugwu Ndị Eze, na mpaghara ọdịda anyanwụ nke osimiri Naịl. Nwanyị nwanyị ahụ bụ otu n'ime ụmụ nwanyị kacha mkpa n'oge ya na otu n'ime ndị Fero na -eme nke ọma, na -achị ruo afọ 21.
Lọ nsọ e wuru ya n'akụkụ nnukwu nnukwu ugwuO nwere ọkwa atọ na -abanye n'ọzara na ndị ọkà mmụta ihe ochie na -ekwu na n'oge ha ala ndị a nwere nnukwu ahịhịa, n'agbanyeghị na ugbu a ha bụ nnukwu ọzara. Osisi nwere ike na -efu, mana ọ ka bụ ọmarịcha saịtị. Enwere ọtụtụ njegharị nlegharị anya na Ndagwurugwu Ndị Eze n'ozuzu ha.
El Ụlọ nsọ nke Ramses II ị ga -amakwa ya. A sị ka e kwuwe, Ramses nke Abụọ bụ otu n'ime ndị ama ama ama ama ama. Ọ bụ mbụ a ụlọ nsọ Yiri Medinet Habu, maka nke ya nnukwu ihe oyiyi a raara nye eze.
El Xlọ Luxor Ọ bụ ụwa ama ama. Ụlọ nsọ dị n'ime obodo n'onwe ya, n'akụkụ osimiri Naịl ọ bụkwa ọmarịcha anya, ọkachasị n'abalị mgbe ọkụ ha na -enwu ma ị nwere ike ịse foto. Templelọ nsọ dị na mbụ bụ Thebes, o yikwara ka a wuru ya n'okpuru usoro ọchịchị nke XNUMX na XNUMX. Sọpụrụ chi Amun-Ra ma o nwere akụkụ dị iche iche site n'oge dị iche iche.
Echekwara ụlọ ahụ nke ọma ma ka nwere ọtụtụ ihe owuwu, ọkachasị veranda nke jikọtara ogige abụọ ya. Ụlọ arụsị ebe a na -asọpụrụ Amọn ka nwere ụfọdụ taịl mbụ ya. N'ụzọ doro anya, ọ bụ World Heritage.
El Omlọ Kom Ombo Ọ dị na Naịl ma raara nye chi abụọ dị iche iche, Horus na Sobek. Ọ bụ ụlọ nsọ ejima nwere ụlọ abụọ arụnyere na enyo. Ọ bụghị agadi dịka ndị ọzọ n'ihi na e wuru ya n'okpuru usoro ndị eze ptolemaic (sitere na Greek na mgbe Alexander Onye Ukwu). Ka oge na -aga, n'okpuru ọchịchị ndị Rom, e mere ụfọdụ ndọtị. Ebe ha achọpụtala, dịka ọmụmaatụ, 300 mummies agụ iyi ma taa, egosiri ha na ebe ngosi nka agụ iyi nke ị nwere ike ịga leta.
El Ụlọ nsọ Edfu dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke osimiri Naịl na ọ bụ otu n'ime ihe echekwara nke ọma na mba ahụ. Nrụpụta ya bidoro na 237 BC wee kwụsị na 57 AD, site n'aka nna Cleopatra, Ptolemy XII. Ọ ka nwere elu ụlọ ya mere ọ na -enye mmetụta ọzọ, na -abịaru nso n'oge.
El Templelọ nsọ nke Seti I. dị na Abydos ma nwee ederede nke Ọchịchị nke iri na itoolu a maara dị ka Ndepụta nke ndị eze nke Abydos, ndepụta oge na katọn nke usoro ndị eze Ijipt ọ bụla site na Menes ruo nna Seti nke Mbụ, Ramses I. Ụlọ nsọ dị n'elu Naịl.
Anyị nwekwara ike ịkpọ aha ahụ ụlọ arụsị nke ndagwurugwu nke ndị eze, n'agbanyeghị na ha adịghị enwu enwu ma ọ bụ na -adọrọ mmasị dịka ndị ọzọ. Ebe ị nwere ike maara ihe Templelọ nke Ramses IV, nke Merneptah na nke Ramses VI. Ha nwere nnukwu ụlọ ikuku, eserese mara mma nke na -egosipụta ihe nkiri sitere n'Akwụkwọ Ndị Nwụrụ Anwụ ... Nke bụ eziokwu bụ na mgbe m hụchara nnukwu nkume, agba na -enwu enwu, oghere na mmetụta nke udo n'ebe ndị a bụ ihe ijuanya. Enweghị sarcophagi ma ọ bụ ihe yiri ya, ha niile gara ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ ndị ohi, mana ọ bụ saịtị kwesịrị nleta.
N'ikpeazụ nke Kọlọsi nke Memnon, wuru gburugburu 1350 BC Ha bụ agba abụọ nke ahụ na -anọchite anya Fero Amenotep III na ọnọdụ ịnọdụ ala. na mbụ ha na -eche nche ọnụ ụzọ ụlọ nsọ ebe a na -edebe ozu nke Fero ahụ. Ụlọ nsọ nke ha so na ya apụọla n'anya na nnukwu ihe mebiri emebi, mana ị ga -eleta ha.
N'ụlọ arụsị ndị a, ọ na -agbakwunye abalị n'ime ọzara, ehihie n'ehihie, na -agagharị na Cairo, nleta Pyramid na n'ezie, njem nke Archaeological Museum of Cairo. Ya bụ, ị gaghị enwe ike ichefu Egypt.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Ụlọ nsọ nke Egypt